Ciidamada Booliska ee Burco oo gaadiidka la leeyahay Maamul-goboleedka Puntland ka qab-qabtay magaaladaas | Xarshinonline News
Ciidamada Booliska ee Burco oo gaadiidka la leeyahay Maamul-goboleedka Puntland ka qab-qabtay magaaladaas
Posted by xol2 on February 26, 2010 · Leave a Comment
Hargeysa (NNN) – Ciidamada amaanka ee magaalada Burco ayaa Shalay ka qab-qabtay gaadiid laga leeyahay maamul goboleedka Puntland magaaladaa. Qab-qabashada gaadiidkaa oo dabo socday, ka dib markii ay kooxaha budhcad baddeeda ee ka jira degaanka puntland ay qafasheen Toddoba gaadhi iyo Sagaal Nin oo Somaliland ah, kuwaas oo ka tirsanaa gaadiidkii Somaliland ee dekeda Brebera ka qaday raashinkii caawimada ahaa ee ay Hay’ada WFP u waday dadka colaadaha iyo abaaruhu daashadeen ee gobolada dhexe ee Soomaaliya.
Mar wax ka weydiisay Taliyaha hogaanka booliska ee gobolka Togdheer Md. Cabdiraxmaan Axmed Liibaan, sababta gaadiidkan looga qab-qabtay magaalada Burco, ayaa wuxu sheegay in ay u hayaan xaalad amni ayna qab-qabteenteen, ka dib markii ay ogaadeen in ay dadkii Shacabka aha ee dadkooda iyo gaadiidkoda lagu qabsaday puntland isku dayi karaan in ay dadkan iyo gaadiidkan waxyeelaan.
Taliyuhu waxa u ka gaabsaday in uu sheego tirada gaadiidka ay qab-qabteen, mar aanu waydiinay in ay xidhan yihiin dadkii gaadiidkan wadayna waxa u sheegay in aanay xidhnayn ee ay gaadiidkooda ilaashanayaan.
Dhinaca kale, gaadiidkii iyo Raggii reer Somaliland ee puntland lagu qafaashay ayaa la sheegay in lagu hayo tuulo u dhow Garacad oo la yidhaahdo Kulud, gaadiidkaas oo dhan Toddoba gaadhi iyo Toddoba nin. Arintan oo aanay ilaa imika wax war ah ka soo saarin dhinacyada Somaliland, Puntland iyo hay’addii gaadiidku u rarnaa toona.
Kooxda budhcad baddeeda ah ee gaadiidka qabsatay ayaa laga soo wariyay in arintan ay u haystaan kooxo budhacd baddeed ah oo ay Somaliland hore baddeeda ugu qabatay, kuwaas oo hay’adaha caddaalada ee Somaliland ku xukumeen xabsi muddadiisu dheer tahay.
Ugu dambeyntii arintan ayaa xukuumada Somaliland iyo hay’adda WFP laga sugayaa sida ay u xaliyaan, iyada oo ay hore u jireen gaadiid ay muwadiniinta reer Somaliland leeyihiin oo Toddobaatan kor u dhaafay isla markaana lagu gubay gobolka is-maamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Kuwaas oo aanay xukuumadu ilaa hadda waxba ka qaban.
Filed under Bulshada
← KULMIYE iyo UCID oo si kala fog uga hadlay tallaabo Komishanka Doorashadu ku hawlan yahay
Dawladda Soomaaliya oo Somaliland uga digay Weeraro kaga yimaadda Al-Shabaab →